हाम्रो सादा टिभी र शहिद दिवसको त्यो गीत - माइपोखरी न्युज
Home BLOG हाम्रो सादा टिभी र शहिद दिवसको त्यो गीत
हाम्रो सादा टिभी र शहिद दिवसको त्यो गीत
म सायद ७-८ वर्षको हुँदो हुँ गाउँमा त्यो बेला बिजुली बत्ती थिएन, त्यस बेला टेलिभिजन आफैंमा अनौठो कुरा थियो। आइतबार दिउँसो २ बजेको समाचार पछी आउने नेपाली फिल्म हेर्न होस् वा बाङ्लादेशको टिभीबाट आउने अलिफ लैला हेर्न होस् हाम्रो घरमा टिभी खोल्ना साथ १०-१५ जना दर्शक यतिकै जम्मा हुन्थे। Everest लेखेको black and white टिभीको नामले मलाई नेपालको सगरमाथा नाम भएको नेपाली टिभी झैँ लाग्थ्यो । हाम्रो मे.अ.ख. १२३ नम्बरको गाडी त्यो बेला थियो या थिएन बिर्सिए तर पसलमा सौदा ल्याउने गाडीमा Rocket नामको ब्याट्री राखेर झापा बुधबारे सम्म लगेर चार्ज गरेको मलाई याद छ।
त्यो दिन गोदामको १ गाडी कुच्चो लोड गराएर मङ्ले गुरुजीले चलाउने गाडीमा बुबाले मलाई नलगी एक्लै नक्सल जानु भएको थियो। मंगले गुरुजीले ब्याट्री गाडी मै चार्ज गरुम् भन्दा बुबाले हुन्न बिग्रन्छ भनेर नमान्नु भएको थियो। गाडीमा २४ भोल्टको ब्याट्री हुन्थ्यो हाम्रो टिभीको १२ को मात्र।
बुबाहरुले ब्याट्री लगेपछि घर सुनसान भयो, आज कोहि मान्छे आएनन्। भोलिपल्ट बिहानै उठेर केही नभएनि बन्द टिभीमा यसो हेरेर दिउँसो स्कुल गएँ। बुबाले ब्याट्री लिएर आउनु हुन्छ र भरे गितान्जली हेर्न पाइन्छ भनेर दिन भर मनमा कुरा खेल्यो। कतिबेला स्कुल छुट्टी होला र घर आएर हत्तपत्त ब्याट्रीमा रातो र कालो चिम्टी जोडेर मिटर कट्याक्क पारेर टिभी खोलौ भन्ने कुराले आज पढेको कुरा प्रायः खासै थाहा पाइन् मैले। हस्त सरको math र विष्णु योङ्हाङ् सरको conversation को कक्षामा पनि मलाई पिटाइ खाने डर नै लागेन मलाई आज। स्कुल छुट्टी हुन् साथ दौडिदैँ घर आइपुगे । खाजा तिर ध्यान नै नदिइ म ठुला घर भित्र छिरेँ तर ब्याट्री थिएन मन खिन्न भयो, मम्मीले खाजा खा भनेर डाक्नु भयो, मलाई साह्रै चित्त दुख्यो, मैले खाइन्। बुबा देखी रीस उठ्यो तर पर्खनु बाहेकको विकल्प थिएन। त्यो दिन भात नि राम्रो सँग रुचेन आज टिभी नहेरी सुत्न लागियो। राति ९-१० बजेको हुँदो हो, मुर्ति डाँडामा गाडी कराएको आवाज आयो, मलाई अब निन्द्रा परेन, अन्ततः बुबाहरु आइपुग्नु भएछ। राती पसलका लागी ल्याएको सरसौदा झार्दा झार्दै अबेर भयो, म निदाएछु।
भोलिपल्ट स्कुल छुट्टि भएकोले त्यो दिन दिन भरी टिभी हेर्न पाए हुने भन्ने मनमा सोच्दै बिहानै उठेर अगेनाको डिलमा मम्मीले राख्दिएको एक गिलास दुधमा चोर औँलाले छाली निकालेर औँला चाट्दै म ठुला घरभित्र पसे केशव मामाले अघि कसैले थाहा नपाइ टिभी खोलेर सानो आवाज पारेर हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। म पनि गएर छेउबाटै हेर्न थालेँ। मलाई झलझल याद आउँछ एउटा गीत अनि त्यसमा बिच बिचमा मिठो आवाजमा हामी शहिदहरुका ऋणी छौँ, शहिदहरु प्रजातन्त्रका जन्मदाता हुन् भनेको अझै याद छ। अहिले थाहा हुन्छ त्यो गीत थियो हेरन शहीदहरुलाई, नेपालीको अनुहारमा हाँसी रहेको। सानो मान्छेमा देश र शहिदहरुको झल्को गराउने अनि गर्व महसुस गराउने त्यो गीत।
शहिदहरुलाई सलाम। तिमी त देशका लागी प्रजातन्त्रका लागी मरेर गयौं तर प्रजातन्त्रका लागी जेल बस्यौं भन्नेहरुले देश र तिम्रा सपनाहरूहरु निमोठेर लथालिङ्ग बनाएका छन्। न ती आफैं मर्न सके न देशलाई बाँच्न दिन सके।
(यो थियो त्यो गीत)
हेरन शहीदहरुलाई …..
नेपालीको अनुहारमा हासिरहेको
उनको भाषा स्वर्गीयलोकमा जहाँ उनि बाचिरहेको
हेरन शहिदहरुलाई –
"हामी शहीदहरुका ऋणि छौ
उनीहरुको आत्म बलिदान पछि – हामीले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौ
त्यसैले शहीदहरु प्रजातन्त्रका जन्मदाता हुन्
शहीदहरु हाम्रा चेतनाका स्रोत हुन्
उनीहरुले हामीलाई कर्तब्य सिकाएका छन्
र आधिकार चिनाएका छन्
आफु उभिएको माटो को माया गर्न सिकाएका छन्
यो देशले हामीबाट अधिकतम मात्रामा चाहेको पनि त्यही नै हो"
पाए उनले दु:ख कति – थापे गोली छातीभरी
नेपालीको मुटु भित्र बाचे उनि सधैभरि
नेपालीको मुटु भित्र बाचे उनि सधैभरि …..
हेरन शहिदहरुलाई …….
नेपाली को अनुहारमा हासिरहेको
"देशलाई माया गर्न हाम्रा मन र कर्म दुवै निस्वार्थ हुनैपर्छ
शहीदका आदर्श हाम्रा आदर्श बन्नुपर्छ
त्यसैले हामी हाम्रो कर्तब्य चिनौ
अधिकारको सदुपयोग गरौ
र शहीदका आदर्शलाई सम्मान गरौ"
ज्वाला फुटाउने आवाज सम्म गुन्जाए
जनताको हितको निम्ति मर्न रमाए
हेरन शहीदहरुलाई …….
हेरन शहीदहरुलाई ……
डा. रामकृष्ण आचार्य, सूर्योदय, इलाम